> Resource > Lugood > Si fudud Bedelka Lugood playlist in iPad
Tirtiray playlist on your iPad kac ahayn, sida iPad mini, oo aad rabto in aad nuqulka Lugood playlist in iPad? Haddii playlists ku saabsan iPad gebi ahaanba la mid yihiin kuwa maktabadda Lugood, waxaad iyaga ka heli kartaa dib aad iPad syncing la Lugood. Haddii aan, aad waayi doontaa playlist iPad marka aad u hagaagsan aad iPad la Lugood. Waa wax la dhibsado, soo maaha?
Dhab ahaantii, in playlist ka Lugood wareejiyo iPad, heer sare ah waxaan kula talin Lugood xirfadle in ay kala iibsiga iPad - Wondershare TunesGo (Windows). Barnaamijka Tani waxay kuu ogolaanaysaa ma aha oo kaliya in aad wareejiso Lugood playlist in aad iPad, laakiin sidoo kale sii kuwii hore. Intaa waxaa dheer, haddii aad lumiso maktabadda Lugood shil, barnaamijkan aad u saamaxaaya in ay u dhiska by dhaqaaqin music iyo playlist ka iPad maktabadda Lugood iyo sidoo.
2 tallaabooyin ay nuqul ka playlist ka Lugood in iPad
Qaybta soo socda idin tusiyo tallaabooyinka fudud ee ku saabsan sida loo soo dhoofsadaan maktabadda Lugood si aad iPad on your computer Windows. Fadlan kala soo bixi this Lugood inay kala iibsiga iPad. Markaas maraan tallaabooyinka.
Tallaabada 1. Connect iPad la PC ka dib markii ay barnaamijkan
Si aad ula bilowdo, abuurtaan barnaamijkan on your computer ka dib markii duuban oo ku rakibidda. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad la your computer. Sida ugu dhakhsaha badan ay ku xiran tahay, barnaamijkan lagu ogaan doonaa iPad ka dibna u soo bandhigaan uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Fadlan soo baxdo iyo rakibi Lugood on your computer ka hor inta uusan playlist maktabadda Lugood in aad iPad.
Tallaabada 2. Transfer playlist in iPad
On column bidix, guji "playlist" tab. Ka dib markii ay suuqa kala playlist u muuqataa in goluhu ay xaq, waa in aad guji saddexagalka yar rogay "Add" hoos. Dooro "Add Lugood playlist". Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax daaqad yar Lugood playlist. By default, oo dhan playlists waxaa lagu saxay. Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan qaar ka mid ah, uncheck aad playlists aan la rabin. Ka dib markii in, guji "OK".
Taasi waa! Way fududahay in la wareejiyo playlists Lugood in iPad, soo maaha?
Dhab ahaantii, Wondershare TunesGo runtii waa barnaamij waxtar leh oo xoog badan. Haddii aad u badbaadiseen heeso iyo playlists badan on your computer, waxa kale oo aad kartaa dajiyaan, kuwaas oo music iyo playlists in aad iPad . Intaa waxaa dheer, barnaamijka awood aad u dajiyaan music, videos, sawiro iyo xiriirada ka computer si aad iPad. Hadda, download barnaamijkan si aad u hesho muuqaalada more socodyada waxa ku saabsan!
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada iPad mini, iPad Air, iPad bandhigay isha, iPad Cusub, iPad 2 iyo iPad, marka iPads kuwan waxaa socda macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 ama 9 macruufka.